Whatsapp Statistics & Facts (2020) - Isaky ny tokony ho fantatrao! - Ara-Tsosialy
Whatsapp dia nahavita nifehy ny media sosialy ho iray amin'ireo fampiharana mety indrindra eto an-tany. Mahitsy izany ary tsy manana doka. Miaraka amin'ny hafatra miafina miafina hatramin'ny farany, manana fiarovana miavaka izy io.
Nisy fotoana izay ilàn'ny Whatsapp famandrihana isan-taona manodidina ny 99 cents. Na izany aza, tamin'ny taona 2016 dia nofoanany ny saram-pisoratana anarana, nahatonga azy io ho afaka ampiasaina marina. Mahagaga izany, sa tsy izany? Andao hijery zava-misy mahavariana momba an'i Whatsapp sy ny antony mahatonga azy ho sehatra lehibe!
Whatsapp Statistics - Zavatra mety tsy ho fantatrao taloha
1. Ilay goavambe sosialy vaovao
Hatramin'ity taona ity, Whatsapp dia manana mpampiasa voasoratra anarana maherin'ny 2 miliara, manao azy ho sehatra media sosialy tsara. Tonga hatrany amin'ny ambaratonga napetraky ny Facebook izy, miaraka amin'ireo mpampiasa 2,6 miliara mahery.
Raha ara-dalàna, Whatsapp dia manana mpampiasa mavitrika betsaka kokoa isam-bolana noho ny Facebook, amin'ny 1,6 miliara. Fampisehoana miavaka ity raha jerena ny fandraràna ny Whatsapp any amin'ireo firenena toa an'i Shina. Manaraka akaiky an'i Whatsapp amin'ny fifaninanana dia Snapchat sy Telegram.
Satria malaza eo amin'ireo mpampiasa Android izy io, sehatra iray nalaza, nisy enina amby efa-polo tapitrisa mahery ny fisintomana tamin'ny taona 2020. Ity isa ity dia mihoatra ny sehatra hafa toa ny Instagram na Facebook, izay mahatonga an'i Whatsapp hijoro tsara amin'ny tany.
2. Ny fanitarana eran-tany
Whatsapp dia misy amin'ny fiteny enim-polo mahery mihoatra ny fidirana eo an-toerana hanintonana ireo mpampiasa teratany. Ankoatr'izay, misy amin'ny firenena 180 mahery izy io. Na dia mihanaka tsikelikely any amin'ny firenen-kafa aza izy io, ny firenena sasany dia mandrara tanteraka ny Whatsapp.
Ireo firenena ireo dia misy an'i Shina, UAE, Syria, ary ireo firenena mitovy aminy izay afaka nitondra ny Whatsapp tamin'ny haavo vaovao. Ny firenena sasany dia manana fetra amin'ny fandefasana hafatra am-peo, raha misy kosa ny fandefasan-kafatra an-tsoratra. Na eo aza izany, Whatsapp dia nisy fiatraikany lehibe tamin'ny tsena eropeana, indrindra any Espana, Italia, ary Netherlands.
Raha Whatsapp dia nipoitra avy tany Etazonia, Kalifornia, dia naneho fitomboana bebe kokoa tany Brezila sy India. Izy io no manana mpampiasa betsaka indrindra amin'ireo firenena roa ireo. India dia manidy ny marika 350 tapitrisa mpampiasa, raha i Brezila kosa dia saika hatramin'ny 100 tapitrisa mpampiasa WhatsApp.
Inona no vaovao ho an'ny orinasa?
Misy mpampiasa voasoratra anarana mihoatra ny 5 tapitrisa ao amin'ny Whatsapp For Business. Sehatra B2B izy io izay mikendry ny hanamora izany ho an'ny tompon'orinasa bitika kely hifaneraserana amin'ny mpanjifa. Misy fiasa katalaogy vaovao izay manamora kokoa ny fizotran'ny fampisehoana.
Facebook dia manana Whatsapp aorian'ny fifanarahana $ 19 miliara. Nisy vaovao momba ny dokam-barotra navoaka tao amin'ny Whatsapp. Na izany aza, ny endrika manintona indrindra amin'ny Whatsapp dia ny interface tsy misy doka ary tsy misy idirana amin'ny antoko fahatelo.
Noho izany, nanapa-kevitra ny Facebook fa hametraka ilay hevitra. Na izany aza, mety hahita doka amin'ny toe-javatra ato ho ato ianao. Mbola hiadian-kevitra izao. Na eo aza izany, ny tompona orinasa dia mbola afaka mandefa ny tolotra omeny ho an'ny mpampiasa hafa, manome valiny haingana, ary maro hafa. Whatsapp dia tsy mitsaha-mitombo laza eo amin'ny maha-fampiharana mailaka matihanina.
Satria tsy misy fampiharana mpampita hafatra ‘orinasa’ hafa, ity dia mety hanaporofoana fa fanampiana sarobidy avy amin'ny Whatsapp.
Antontan'isa momba ny fampiasana Whatsapp:
Na eo aza ny fitomboany miadana any Etazonia, manodidina ny 53% amin'ireo mpampiasa amerikana no mitantana ny fidirana amin'ny Whatsapp isan'andro. Misy ny faminaniana fa hitombo ny lazan'ny Whatsapp any Etazonia. Mpampiasa maro izay maniry ny Whatsapp Messenger sy Snapchat no mihetsika tsikelikely amin'ny Whatsapp.
Hafatra manodidina ny 65 miliara no alefa ary voaray amin'ny Whatsapp isan'andro. Ireo hafatra ireo dia miainga amin'ny lahatsoratra ka hatramin'ny hafatra multimedia sy feo. Ireo antontan'isa fampiasana ireo dia mametraka ligy Whatsapp mihoatra ny mpamatsy malaza maro hafa. Raha ampitahaina amin'ny antontan'isa 2011 misy hafatra mihoatra ny 2 miliara isan'andro dia fitomboana mitombo io.
Tsy misy fanentanana marketing tokana izany rehetra izany !!
Tsy mbola nisy dokambarotra tokana momba ny Whatsapp. Whatsapp tsy mipetraka amin'ny mpiasa marketing ihany koa. Ity dia zava-misy mahavariana raha jerena ny fahefana ananan'ity fampiharana ity manerantany. Satria ny mpanorina Jan Koun sy Brian Acton dia tsy nanaiky velively ny doka.
Ny tanjon'ny Whatsapp dia ny hanana sehatra minimalist miaraka amin'ny fanomezana hafatra tsotra. Tsy toy ny sehatra malaza hafa izay mampiasa vola be amin'ny doka, Whatsapp dia nampifantoka ireo vola ireo mba hanatsara ny fampiharana ho an'ny mpampiasa. Noho izany, nampiditra endrika mahasoa maromaro izy io.
Na eo aza izany rehetra izany, Whatsapp no ​​fampiharana voarara indrindra eran'izao tontolo izao. Saingy, any amin'ny firenena ny ankamaroany dia miahiahy ny amin'ny fandrahonana sy ny ahiahy iraisampirenena momba ny fampiasana fampiharana. Ny zava-misy mahafinaritra hafa dia ny hoe na eo aza ny fandrarana azy any Shina, manodidina ny roa tapitrisa ny olona mampiasa Whatsapp.
Manofy dolara folo miliara!
Jan Koum, mpanorina ny Whatsapp sy ny tale jeneraliny mavitrika, dia nilatsaka tao amin'ny oniversite. Ity tantara ity dia mifanitsy amin'ireo olona mahomby hafa toa an'i Bill Gates, Steve Jobs, ary Mark Zukerberg. Jan dia niasa tamin'ny Yahoo tany am-piandohana talohan'ny nanombohany ny dian'ny fampandrosoana ny sehatra nataony.
Rehefa nanomboka nitombo tsikelikely ny isan'ny mpampiasa azy i Whatsapp dia nanolotra fifanarahana tamin'i Whatsapp i Google. Fifampiraharahana $ 10 miliara, izay nolavin'ny mpanorina. Fantatr'izy ireo ny lanjan'ilay fampiharana azy ireo, izay mihoatra lavitra noho izany aza — izany dia nanakivy ireo goavambe hafa tsy hametraka ny fifanarahana rehetra.
Na izany aza, nanao hetsika tamim-pahasahiana ny Facebook ary nanolotra fifanarahana 19 miliara dolara ho an'ny Whatsapp. Marina sy fotoana mety hananana ilay fampiharana. Na eo aza ny lazan'ny Facebook momba ny fividianana azy, izany no fividianana lehibe indrindra tamin'ny fotoana rehetra.
Jan Koum dia lasa miliardera tamin'ny 2014. Amin'ny taona 2020, manana sandam-bola mihoatra ny 10 miliara izy. Raha lazaina amin'ny teny hafa dia aingam-panahy hafa ho an'ny tanora izy!
Nandritra ny fifampiraharahana Facebook tamin'ny 2014, 14 dolara dolara no vidin'ny NASA raha nividy Whatsapp tamin'ny $ 19 Billion izy ireo. Nasa dia mitentina eo amin'ny $ 22- $ 23 Miliara na dia ankehitriny aza , raha Whatsapp kosa miorina amin'ny $ 25 miliara.
Raha ara-dalàna, dia lavitra lavitra noho ny harin-karena faobe amin'ny firenena maro manerantany. Raha te hametraka izany amin'ny fomba fijery ianao, dia manana vola mitentina 6 miliara dolara amerikana.
Tsy miadana ny WhatsApp!
Any no anananao! Ny zava-misy mahaliana indrindra momba ny Whatsapp sy ny fampiasana azy. Na izany aza, afaka jerentsika izay tsy hihena Whatsapp atsy ho atsy. Tsy voafetra amin'ny Android Smartphone intsony izy io. Androany, misy amin'ny Internet izy io, ho an'ny PC sy fitaovana hafa koa. Inona koa no azonao tratrarina Whatsapp? Eny, izany dia miankina amin'ny vinavina!
Saison 2 an'ny Love Is Blind: Iza amin'ireo mpivady no mbola miaraka?
Ny fitsidihana voatahy sy maimaimpoana an'i Kane Brown dia hampiditra daty amin'ny volana Mey sy Jona.
ny saron-tava feno mpamono sarimihetsika feno
roblox tsy nifandray tamin'ny lalao id 17
lalao baolina kitra mivantana an-tserasera maimaim-poana
sarimihetsika tsara indrindra download HD maimaim-poana
ny fomba fidirana voasakana lahatsary YouTube
Ahoana ny fomba hanaovana dokambarotra maimaimpoana ny lalao roblox anao
ny fomba hijerena sarimihetsika maimaim-poana amin'ny Internet tsy misoratra anarana